China Motor okpomọkụ ihe mmetụta Manufacturer - Quality Motor okpomọkụ sensor Quotation - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Okpomọkụ mmetụta > Igwe ihe ọkụkụ ọkụ
Motor isi RTD
E liri na generator stator iron core, ozugbo a gbakọtara ígwè ahụ, a gaghị enwe ike ịkọwapụ ihe mmụba nke okpomọkụ. Nchegbu kachasị mkpa bụ nkwụsi ike ogologo oge na ndụ ọrụ.
Motor asọfe RTD
Agbakwunyere na winding akụkụ ndị na-enweghị ike imetụ mgbe emechara moto ahụ, ọ gaghị enwe ike dochie anya. Ogologo ogologo oge na ogologo oge dị oke mkpa. Ndị na-eme ya: Ngwunye ọnya waya iji hụ na obere okpomọkụ nke onwe na-ebili.
Ejikọtara ọnụ stator isi RTD
A na-ejikarị nnukwu okpomọkụ na nrụgide arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji tụọ okpomọkụ stator nke nnukwu ndị na-enye ọkụ na ọkara.
asọfe okpomọkụ ihe mmetụta
A na-ejikarị okpomọkụ dị elu na nrụgide mgbali elu okpomọkụ jikọtara ọnụ iji tụọ okpomọkụ nke stator nke ndị na-emepụta nnukwu na ọkara.
Winding stator okpomọkụ ihe mmetụta
Winding RTD (TW2010Pt100-100-3-3204 / 00F200 / X) nwere obere okpomọkụ ịrị elu na a pụrụ ịdabere na okpomọkụ mmesho.
Stator asọfe okpomọkụ ihe mmetụta
Mgbawa-ụdị stator okpomọkụ ihe mmetụta (T2010Pt100-100-5-3200 / 01) nwere obere okpomọkụ ịrị elu na a pụrụ ịdabere na okpomọkụ mmesho.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Igwe ihe ọkụkụ ọkụ na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Igwe ihe ọkụkụ ọkụ dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.